Jowhar.com - Somali news Leader - News: Dowladda Soomaaliya oo xabsiga dhigtay Xoghayihii arrimaha dibada Xisbul Islaam
December 06 2013 00:13:19
Dowladda Soomaaliya oo xabsiga dhigtay Xoghayihii arrimaha dibada Xisbul Islaam
Warar soo baxaya ayaa sheegaya in ciidamada dowladda Soomaaliya ay xireen Sheekh Maxamed Macalin oo ahaa Xoghayihii ururka Xisbul Islaam ee dhinaca Arrimaha dibada, kaasoo goor dhoweyd Mas'uul u hadlay ururkaas uu sheegay inay xilka ka qaadeen.
Wararka ayaa sheegaya in Maxamed Macalin lagala baxay Hotel uu ka deganaa magaalada Muqdisho, iyadoo war uu saxaafada siiyay ku sheegay maalin ka hor in Ururka Xisbul Islaam uu shir nabadeed ugaga furmay magaalada Muqdisho.
Goor sii horeysay ayaa Ismaaciil Xaaji Caddow oo la hadlay qaar ka mid ah warbaahinta Muqdisho oo sheegtay inuu yahay Xoghayaha guud ee Golaha Shuurada Xisbul Islaam waxaa uu ka dhawaajiyay in Sheekh Maxamed Macalin ay xilka ka qaadeen, isla markaana aanu jirin shir ugaga furmay Muqdisho.
Lama oga halka uu ku xiran yahay, hase ahaatee xubno ka tirsan Xisbul Islaamkii bur buray ayaa sheegaya in la xiray Maxamed Macalin oo ka mid ahaa garabyo ururkaas ka tirsanaa oo Muqdisho ka waday dhaq dhaqaaq.
Ma jirto wax war ah oo ka soo baxay dowladda Soomaaliya oo ku aadan xarigan ninkan, hase yeeshee waxaa uu maalin ka hor sheegay in Sheekh Xasan Dahir loo wareejin rabo Xabsiga dhexe, isla markaana dowladdu dooneyso inay Maxkamad Milateri saarto.
0 Comments · 3930 Reads
jowhar.com3,086,401 unique visits